Ọsọ Abiola Esula nʻAPC – Ụwandịigbo
Posted July 24, 2018 April 18, 2019 Omenka
Onyeisiala Mohammed Buhari
Ọgbaaghara adaala n’ụlọmmebeiwu nta nke Naịjiria nke a na-akpọ House of Representatives na Bekee. Ihe karịrị ndị omebeiwu iri atọ na asaa ahapụla All Progressive Congress (APC) ha nọbu na ya wee gbaga Peoples Democratic Party (PDP).
Onye mere ka a mata nke a bụ Okwupụtaokwu ụlọomebeiwu ahụ bụ Yakubu Dogara. Maazị Dogara kwuru nke a mgbe ọrụ malitere ụbọchị Tuuzdee. Maazị a mekwara ka a mara na ndịomebeiwu anọ ndị ọzọ hapụwara APC were banye African Democratic Congress (ADC).
Ndị mmadụ na-ajụzị ihe mere ndị nọ na APC, nke bụ otu onyeisi ala bụ Mohamed Buhari, ji agba ọsọ Abiola ka a ga-asị na ya bụ ụgbọ APC na-ekpu ekpu.
⟵Mmekọrịta nʻEtiti Ọbaramgbalielu, Ọrịa Shuga na Isi
Nkwado Maka Ụbọchị Ndịigbo Ebirile Ọkụ na Boston⟶